Guddoomiyaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed oo sheegay in ay muhiim tahay la-dagaallanka bur-burinta hidaha iyo dhaqanka – Kalfadhi
November 18, 2020 November 18, 2020 Hassan Istiila
Maktabadda Qaranka Qatar iyo Machadka Tababarka iyo Cilmi-baarista ee Qaramada Midoobay (UNITAR) ayaa todobaadkii hore, isugu yeeray khubaro ka kala socday qaar kamid ah dalalka adduunka, kuwaas oo ka qeyb-galay madal looga hadlayay doorka muhiimka ee maktabadaha Qaranku ku leeyihiin dunida soo koraysa.
Guddoomiyaha Baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed oo kamid ahaa mudanayaashii ka qeyb-galay madasha, ayaa ka hadlayay bur-burinta waxyaabiha hidaha iyo dhaqanka ee dal uu leeyahay.
“Waa muhiim in lala dagaallamo bur-burinta hidaha iyo dhaqanka iyo ka ganacsiga sharci darrada ah”ayuu yiri.
Helitaanka tallaabooyin ka hortag ah iyo kordhinta iskaashiga caalamiga ah, ayaa sidoo kale muhiim ah, dhammaanteenna waxaan u baahanahay inaan ka qayb-galno howshan, ayuu kusoo gunaanuday hadalkiisa.
Madasha oo looga qeyb-galay aalada Zoom-ka ayaa mas’uuliyiintii kale ee ka hadlay waxaa kamid ahaa wasiirka ciyaarada ee Kenya Marwo Aamina Maxamed, wasiirka arrimaha dibadda ee Gambia, Ra’iisul wasaarha Haiti iyo xubno kale.
Kaddib bur-burkii dowladdii dhexe ee dalka Soomaaliya, dagaalladii sokeeye ayaa waxaa ay galaafteen hidihii iyo dhaqanka dalka Soomaaliya lagu aqoon jiray, balse hadda waxaa socda soo kabasho xooggan.
Guddiga Arrimaha Bulshada oo kulan looga hadlayay Hindise-Xeereedka ilaalinta Af-Soomaaliga la qaatay Wasaaradda Waxbarashadda